တစ်ခါသုံး RFID Tie Tag ကို, Disposable RFID Cable Tie Tag, Disposable UHF Cable Tie Tag, Disposable UHF Tie Tag, Disposable Logistics Management RFID Tie Tag
 » RFID ဆကျကပျ Tag ကို » အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် / Tie / ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Tag ကို
တစ်ခါသုံး RFID Tie Tag ကို, လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Cable ကိုတွဲချည် Tag ကို
အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် / Tie / ထောက်ပံ့ပို့ဆောင်ရေး Tag ကို Disposable Logistics Management RFID Tie Tag, Disposable RFID Cable Tie Tag, တစ်ခါသုံး RFID Tie Tag ကို, Disposable UHF Cable Tie Tag, Disposable UHF Tie Tag
optional RFID ချစ်ပ်: Alin h3 / G2XM / XL, Mifare 1k S50, Mifare S70 4K, NXP Ultralight, NXP Desfire, TI, ငါကုတ် 2, FM1108(Mifare 1k S50 နှင့်သဟဇာတ),စသည်တို့ကို.
protocol စံ: ISO18000-6C / ISO15693 / ISO14443
သိုလှောင်ခြင်း: EPC 96bits, တိုးချဲ့မှတ်ဉာဏ် 512bits
အလုပ်လုပ်အကြိမ်ရေ: 860~ 960MHz / 13.56MHz
အကွာအဝေးကိုဖတ်ပါ: 0~ 8 မီလီယံ(tags များအမျိုးအစားနှင့်ဆက်စပ်သောနှင့် / ရေးကိရိယာ၏စီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုကိုဖတ်ရှု)
အလုပ်လုပ်အပူချိန်: -25~ + 75 ℃
သိုလှောင်ခြင်းအပူချိန်: -35~ + 85 ℃
installation နည်းလမ်း: လွယ်ကူသောဆွဲချိတ်
ပစ္စည်း: PP / ကို ABS / PVC
ပတ်ဝန်းကျင်ထိန်းသိမ်းရေးကာကွယ်မှု: ROHS ညီ
အရွယ်: 2541 × 1mm ×, အရှည် 395mm(Size ကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်နိုင်ပါတယ်),Φ100mmနှင့်အတူကုန်စည်ထုပ်ပိုးနိုင်သလား
ဆွဲပါ: 180-200N / 430-460N
သော့ခတ်: 95-110N / 210-215N
Disposable RFID Cable Tie can be customized according to different frequency and specifications. The electronic tag of the signage part is in an external position for bundling, which is not affected by the material of the material to be bound and can be stably read and used conveniently. Resistant to moisture, heat, စသည်တို့ကို, can be used in harsh environments.
RFID electronic cable tie labels are widely used in logistics tracking management, such as animal epidemic prevention, food safety traceability, power line classification, telecommunication line management, ဂိုဒေါင်စီမံခန့်ခွဲမှု, container sealing, express parcels, ပိုင်ဆိုင်မှုဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲခြင်း, prisoner management, စသည်တို့ကို.
In the pork traceability system, pigs are placed in the pigsty and the electronic label is worn to record the status of their farming. At slaughterhouse processing, attachalabel to each piece of pork, record the source of each piece of pork with tag information, and monitor all aspects of slaughtering and logistics. When sold in stores and supermarkets, the contents of the tag's chips can be read directly by the electronic scale - meaning that every eligible pork has an "ID." Customers buy pork, pork directly through the electronic tag attached to obtain, including pork weight, price, sales store number, place of origin, immune, စသည်တို့ကို. can be traced back to trace the important information.
I am interested in your product Disposable RFID Tie Tag, လှိုင်းနှုန်းသည် UHF Cable ကိုတွဲချည် Tag ကို
prev: ပြန်သုံးနိုင်သော RFID Tie Tag ကို, ပြန်သုံးနိုင်သောလှိုင်းနှုန်းသည် UHF Cable ကိုတွဲချည် Tag ကို
နောက်တစ်ခု: LF / HF အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်, LF / HF အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် Tag ကို, အီလက်ထရောနစ်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် Tag ကို
LF / HF အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်, LF / HF အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် Tag ကို, အီလက်ထရောနစ်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် Tag ကို
ပြန်သုံးနိုင်သော RFID Tie Tag ကို, ပြန်သုံးနိုင်သောလှိုင်းနှုန်းသည် UHF Cable ကိုတွဲချည် Tag ကို
လှိုင်းနှုန်းသည် UHF အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်, အီလက်ထရောနစ်အထိမ်းအမှတ်တံဆိပ် Tag ကို, လုံခြုံရေးအထိမ်းအမှတ်တံဆိပ်